【Mandarin Morning - Chinese ule center mmasị Confucius Institution】: HSK ule emmepe ruru eru ule center Usoro: 8980901
Confucius Institute isi ọrụ bụ: ihu ụwa na obodo nke expatriates izi Chinese asụsụ; ịzụ Chinese asụsụ ndị nkụzi; Chinese asụsụ nkụzi asambodo ule na Chinese azụmahịa; enye Chinese agụmakwụkwọ, omenala, na-elekọta mmadụ na aku na uba ọmụma alo; na-ebu nnyocha Contemporary China.
【Mandarin Morning-Hanban "International Chinese Teachers Certificate" asambodo udomo oro ọzụzụ center】: ule saịtị Usoro: 8980950
Hanban bụ alụmdi mmasị ka Chinese Ministry of Education, na-agba mbọ na-enye ụwa nke Chinese asụsụ na omenala ozizi ego na ọrụ iji na-egbo mkpa nke esenidụt Chinese na-amụ, n'ihi na nkwonkwo mmepe nke omenala di iche iche na-eme ka ụlọ a adabako ụwa.
【Mandarin Morning, bụ International Education Practice center nke Tianhua Institute of Shanghai Nkịtị University】